बैंककबाट फर्केपछि एयरपोर्टमा के भने एमाले अध्यक्ष ओलीले ? - Everest Dainik - News from Nepal
बैंककबाट फर्केपछि एयरपोर्टमा के भने एमाले अध्यक्ष ओलीले ?
काठमाडौँ, वैशाख ७ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्र संविधान संशोधनबारे सोच्न सकिने बताउनुभएको छ ।
याे पनि पढ्नुस सरकारको आलोचनामा खर्चने समय देश निर्माणमा लगाउनुहोस्ः प्रधानमन्त्री
याे पनि पढ्नुस देशको विकास र समृद्धिका लागि सबै नेपालीबीच एकता आवश्यकः अोली
याे पनि पढ्नुस प्रधानमन्त्रीको तलब अब ९४ हजार, अरुको कति?
अध्यक्ष ओलीलाई पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेल, नेता सुवास नेम्बाङलगायतले स्वागत गर्नुभएको थियो । रासस ९श्रव्य सामग्री उपलब्ध छ०